🥇 ▷ Waa maxay sababta 'tirtirka dhammaan' farriinta WhatsApp aysan u badneyn sida aad u maleyneyso ✅
Waa maxay sababta ‘tirtirka dhammaan’ farriinta WhatsApp aysan u badneyn sida aad u maleyneyso
Waxay umuuqataa shaqo had iyo jeer jiri jirtay, laakiin taasi tirtir farriin horey loo soo diray Waxay ahayd kacaan loogu talagalay WhatsApp bishii Oktoobar 2017. Ku dhawaad ​​laba sano ka dib markay bilaabatay inay ka muuqato taleefannada mobilada, waxaan durbaba caadeysanay inaan tirtirno xogta, macluumaadka ama xitaa sawir aan aanan dooneyn ama aan ku wadaagnay sheekada. Qof walbana wuu u aqbalay inay tahay wax macquul ah, lama huraan ah sidoo kalena badbaado leh. Hagaag, hadda waa waqtigii la ogaan lahaa taas Xitaa WhatsApp xitaa mas’uul kama ahan howshan dhab ahaan tirtirka farriinta.
Mana aha lagama maarmaan inay tahay inaan ku noolaanay khiyaano intii lagu jiray labadan sano, waa in howsha aysan waligeed si waxtar ah u dhicin. In kasta oo naloo horseeday inaan ka fikirno in isticmaaleha kale ee wadahadalka uusan arki doonin fariinta, runtu waxay tahay in ay jiraan qaacido looga hortago waxyaabahaan in si dhab ah looga tirtiro wada sheekeysiga. Iyo xitaa intaa ka sii badan, waxaa hadda la ogaadey in, marka laga hadlayo madal iOS, in, haddii aad leedahay iPhone, ay macquul tahay in Sawirrada aad u maleysay inaad tirtireysay waligood gabi ahaanba lama tirtirin. Laakiin qaybta ugu xun ayaa ah in WhatsApp u muuqdo mid deggan.
WhatsApp ma tirtireyso sawirada iPhone
Macluumaadkii ugu dambeeyay ee lagu daabacay TheHackerNews.com waxaa loola jeedaa arrin qarsoodiya oo saameyn ku leh WhatsApp-ka iPhone. Sida la daabacay, marka sawir loo diro isticmaale iPhone ka dibna la tirtiro, Nuqul ka mid ah ayaa lagu kaydiyaa dhabarka ama muuqaalka iPhone. WhatsApp waxay ku ogaysiineysaa wada sheekeysiga in farriinta la tirtiray, laakiin runtu ay tahay in raad raacyadu sii jiraan.
Sida muuqata, ka dib markii ay soo ogeysiisay WhatsApp xaqiiqadan, shirkadda waxay ku dhawaaqday in shaqadan tirtirka ah dammaanad kama qaadayso in waxa ku jira gabi ahaanba la tirtiray. Waxay diiradda saartaa, halkii, ay ka koobnaan lahayd waxyaabaha ka lumay WhatsApp. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqdaan inay nadiifiyaan gacmahooda ku saabsan isticmaalaha hela ee eegaya waxa ku jira. Ama maxaa yeelay waxay goob joog ka ahayd wada hadalka ka hor intaysan cid dirayuhu baabi’in, ama sababta oo ah iPhone nuqullada faylasha multimedia waxaa lagu soo dejinayaa si caadi ah xarunta.
Dhibaatadu waxay ka timid ikhtiyaar ka imanaya inuu firfircoon yahay WhatsApp oo loogu talagalay iPhone telefishanka asal ahaan, wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad kala soo baxdo dhammaan waxyaabaha ku jira sheekooyinka sheekaysigu ku yaallo xarunta tareenka. Haddii astaantan aan la baabi’in, faa iido ma leh in la tirtiro farriinta WhatsApp-ka. Xitaa markii la sameeyo inta lagu jiro saacadda, 8 daqiiqo iyo 16 ilbiriqsi in codsigu kuu oggolaanayaa inaad u isticmaasho tirtirka shaqeynta qof walba.
Dabcan, on Android, marka muuqaalkan la isticmaalo, sawirka kaliya looma tirtirayo qaataha, laakiin sidoo kale kan diraaha. Ka tagida raad-yar iyo asturnaan dheeraad ah. Laakiin macnaheedu maahan, si kasta oo ay tahay, in qaataha uusan arki karin waxa ku qoran ka hor inta aan la tirtirin.
Codsiyada lagu aruurinayo dhammaan farriimaha
Dabcan, ha iloobin in ay jiraan aalado kale oo waxtar leh si loo badbaadiyo rikoorka wada sheekeysi ee WhatsApp. Taasna waxaan ula jeednaa keydinta dhammaan farriimaha, xitaa kuwa la tirtiray markii la diray ka dib. Tani waa kiiska WAMR ee taleefannada Android, oo ay la socdaan uga tag nuqul dhammaan farriimaha soo socda ee WhatsApp, in kasta oo markii dambe la baabi’iyo. Kaliya rakib ka dibna dib u eeg fariimaha ku keydsan halkan.
In kasta oo arji loogama baahna in lagu qasbo jiritaanka farriinta wada sheekaysiga. Codsiga WhatsApp laftiisa wuxuu leeyahay qaniinyo ama khiyaamo faa’iido leh sidaa darteed xog aan la tirtirin. Ku filan abuuro jawaab farriin. Sidan, haddii farriinta asalka ah la tirtiro, waxaa loo akhriyi karaa dhinaca xiga jawaabta hoose.
Waxaa laga yaabaa in loogu talagalay dhammaan barnaamijkan WhatsApp ma doonayo inuu mas’uul ka noqdo shaqadiisa. Oo waxaa jira farsamooyin badan iyo qalab lagu xafido waxkastoo lagu sheegay sheekada. Taas ayaa yidhi, ayaa lagu yidhi. Marka sirtu waa xaqiiqo qaraabo ah oo ku jirta WhatsApp.
Warar kale oo ku saabsan… WhatsApp